अन्तर्राष्ट्रिय — donnews.com
झारखण्ड, २९ चैत । भारतको झारखण्डमा आइतबारदेखि केबलकारमा अड्किएका १५ व्यक्तिको अझै उद्धार हुन सकेको छैन । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार झारखण्डको देउघर जिल्लाको त्रिकुट पहाडमा रहेको रोपवेमा चलिरहेका दुई केबलकार […]
नयाँदिल्ली, १९ चैत । नेपाल र भारतबीच आज चारवटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा ती समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी […]
नयाँदिल्ली, १९ चैत । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादको विषय समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल शुरु गरेका छन् । नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने क्रम नरोकिएपछि उठेको विवादले […]
किभ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो सरकार रुससँगको शान्ति सम्झौताका लागि तटस्थ नीति अबलम्वन गर्नेबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन् । रुसी स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा उनले यस्तो […]
नेपाल–चीनबीच नौ समझदारीमा के छ ?
काठमाडौं, १२ चैत । नेपाल र चीनबीचको सहकार्यात्मक सम्बन्ध एवम् साझेदारीलाई अझ घनीभूत तुल्याउन दुवै देश सहमत भएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भएको नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा त्यस्तो सहमति भएको हो […]
परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता
काठमाडौं, १२ चैत । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले शनिबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काबीच औपचारिक भेटवार्ता सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा २० जना चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग […]
युक्रेनमा पालना भएन युद्धविराम
एजेन्सी, २२ फागुन । किभरमस्को । सैन्य आक्रमण सुरु गरेको दसौं दिनमा युक्रेनका दुई सहरमा ‘अस्थायी युद्धविराम’ घोषणा गरेको रुसले त्यसको पालना नगरेपछि सर्वसाधारणको उद्धारमा कठिनाइ भएको छ । रुस तथा […]
अन्योलमा छन् युक्रेन छाडेका नेपाली
काठमाडौं, १९ फागुन । कुरियर कम्पनीको काम सकेर युक्रेनको राजधानी किइभमा रहेको आफ्नो होस्टेलमा आइपुग्दा गोविन्दले धेरै ुकल मिसु गरेछन्। उनको मोबाइलमा नेपालदेखि आफन्तजन र साथीभाइले निकै पटक सम्पर्क गर्न […]
एमसीसी मुख्यालयले भन्यो-‘अनुमोदन स्वीकार, सम्झौता कार्यान्वयनको दिशातर्फ’
काठमाडौँ, १८ फागुन । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले आफू र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब कार्यान्वयनको […]
प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीको फोन, युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणबारे संवाद
काठमाडौं, १८ फागुन । युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण जारी रहेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका छन् । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौम […]